Twitter ayaa tirtiraya fiidiyoow uu daabacay Donald Trump - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Twitter Tirtira fiidiyowga lagu daabacay Donald Trump
Twitter ayaa soo saarey fiidiyoow uu daabacay Donald Trump
Twitter joogto ah Donald Trump wuxuu isticmaalaa shabakada bulshada si uu ugala hadlo go'aankiisa siyaasadeed, laakiin sidoo kale wuxuu dhaleeceeyay saxaafadda ou ka soo horjeeda siyaasaddiisa. Maalintii Talaadada, 9 April, madaxwaynaha Maraykanka ayaa soo bandhigay muuqaal cajiib ah oo cajalad muuqaal ah oo muujinaya sawiro iyo muuqaalo intii lagu jiray muddadii uu hayay. Dhamaan muusikada ay isticmaalaan internetka si dhakhso ah u aqoonsadeen, maadaama ay ahayd heesaha codka Film Knight Dark The gaartaysii daayay in 2012.
Sida ku qoran bogga BuzzFeed Newsfiidiyowga ayaa laga soo saaray Twitter dhowr saacadood ka dib, ka dib markii ay soo uruurisay malaayiin aragtiyo. Meelaha kala-sooca, fariin ay daabacday shabakadda bulshada: "Warbaahintan waa la naafoobey ka dib warbixintii ay sameeyeen hayada" copyright ". Marka laga hadlayo codka dhawaaqa Knight Dark The gaartaywaa shirkadda Warner Bros., taas oo caddaynaysa in ay codsatay in la soo daayo mawduuca.
Faafreeb dhif ah
"Isticmaalka heesaha Knight Dark The gaartaykuwaas oo xuquuqdooda ay haystaan ​​Warner Bros., looma oggola. Waxaan ku dhejineynaa nidaamkayaga sharciga ah ee sida caadiga ah si fiidiyooga looga saaro "ayuu yiri afhayeenka shirkadda BuzzFeed News. Sida uu soo wariyay warbaahinta Mareykanka, fiidiyoow uu soo daabacay Donald Trump waxaa laga soo qaatay koontada YouTube oo la yiraahdo MateyProductions, kaas oo daabacaa inta badan kumbuyuutarada. Fiidiyowga ayaa sidoo kale laga saaray YouTube.
Waa dhif iyo naadir in Twitter ka saaro content uu daabacay by Donald Trump on platform ah. Sida loo soo celiyay qarka u saarantaxane hore ayaa loo caydhiyay Febraayo hore, sidoo kale sababtoo ah xadgudubka copyright.
Madaxweynaha Maraykanka, qaar ka mid ah ay ka hortagi karto Xeerarka shabakadda bulshada, si kastaba ha ahaatee, waxay ku raaxaystaan ​​nidaam qadarin ah. Bishii Jannaayo 2018, Twitter daabacay saxaafadeed, oo sharraxaya inaanay rabin in ay mamnuucaan hoggaamiyeyaasha adduunka ee adeeggooda si aanay ugu dhicin "xog muhiim ah" dadka isticmaala.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.bfmtv.com/tech/twitter-supprime-une-video-publiee-par-donald-trump-1669936.html
La Fouine: jinsiyadiisii ​​ayaa diidday labada dhinacba, ayuu ku qayliyay rasaaskiisa
Murielle Ahoure / Marie-Josée Ta Lou: Boqoradda Sprint waxay isku dayeen in ay noqdaan fanaanad quruxsan on canvas (+ images) - Abidjanshow.com
Dabaysha: Kady Kleen oo maanta lagu aasay ...
Cameroon vs Comoros (Tilmaamaha iyo gool) Choupo Moting, MASIIXIGA IYO Clinton BASSOGOG N'Jie - VIDEO